Hordhaca kulanka xiisaha iyo xamaasda leh Liverpool vs Barcelona lugta labaad ee semi-finalka Champions League – Walaal24 Newss
Hordhaca kulanka xiisaha iyo xamaasda leh Liverpool vs Barcelona lugta labaad ee semi-finalka Champions League
May 7, 2019	Off	By walaal24
Weeraryahanka Liverpool Rhian Brewster ayaa diyaar u ah inuu ciyaaro kulanka Champions League ee ay la leeyihiin Barcelona, ​​sida laga soo xigtay macalinka kooxda Jurgen Klopp.
Liverpool waa inay ka soo laabato 3-0 ah ka soo gaartay guul darradii ugu horeysay ee todobaadkii hore si ay u gaarto finalka sagaalaad ee Koobka Kooxaha Yurub.
Reds ayaan hareynin weeraryahanada Mohamed Salah iyo Roberto Firmino, taas oo macnaheedu yahay weeraryahanka Brewster inuu kusoo bilowdo.
Kulanka wuxuu soo galayaa Caawa Saacada Geeska Afrika marka ay tahay 10:00 pm Habeenimo:
“Waxa uu diyaar u yahay, fursad weyn ayay leedahay kooxda, waa hubaal waa hubaal, waa la hubaa,” ayuu yiri Klopp oo uu ku tashanaayo cayaryahanka Brewster.
“Xaaladahan marwalba way jecelyihiin, adduunka ugu fiican, xilli ciyaareedka waxaad mar walba haysataa ciyaaryahano ka badan intaad ku biiri kartid koox.
“Marka aad ku jirto kursiga keydka, waxaad tahay fursad aan ku ciyaaro.”
Brewster ayaa loo magacaabi doonaa ciyaartii ugu danbeysay ee ciyaarta, markii labaad oo aan la isticmaalin kulankii Crystal Palace ee bishii April 2017.
Ciyaaryahanka da’da yar ayaa ku dhibtooday dhaawacyo xilli ciyaareedkan, laakiin Klopp ayaa sheegtay inuu soo kabsaday sharaftiisa.
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Rhian ayaa qaab ciyaareed fiican ku jiray seddex ama afar isbuuc ee ugu danbeysay, laakiin ciyaartoyda kale waxa ay sidoo kale joogeen.
“Kaliya waa fiican tahay haatan, haatan waa ku fiican tahay xaalad adag oo aan ku siin karno booskaas xulka, waxaana u heysanaa inuu weeraryahan ahaan u keeno.”
Inkastoo ay 3-0 kaga badiyeen Klopp ayaa rajeynaya in Liverpool ay horumarineyso finalka Champions League, hadii ay guul dareystaan ​​waxay ku guuldareystaan ​​inay ku guuleystaan ​​habka ugu quruxda badan.
“Waxaan ka fogeynay inaan ka baxno,” ayuu yiri Klopp. “Waxaa jira rajo.
“Haddii ay jirto fursad ay u aadaan wareega xiga, waa inaan isku daynaa.”
Klopp ayaa intaa ku daray: “Waxaan dooneynaa inaan u dabaaldegno ololaha Champions League, ama hadii uu si fiican u dhameysto ama gool kale.
“Haddii aan sameyn karno, cajiib ah, hadaanna ku guul dareysan habka ugu quruxda badan, haddii aad rabto, natiijo aad u dhow.”
Labo gool oo uu ka dhaliyay Lionel Messi iyo weeraryahankii hore ee Liverpool Luis Suarez ayaa ku soo barbaaray Barca lugta hore ee Isbuucii lasoo dhaafay ee Camp Nou.
Barcelona ayaa iska xaadirisay seddexda gool ee ay ku badisay Roma xilli ciyaareedkii hore ee quarter-finalka, lakiin dhamaadka Isbuucaan ayaa kooxda heysata horyaalka Spain ee heysta rikoorka inay ku nastaan ​​11 ciyaaryahan oo ciyaaray Arbacadii hore guuldaradii Sabtida ee Celta Vigo.
Liverpool ayaa dooneysa kaliya inay noqoto kooxdii seddexaad ee taariikhda Champions League ama Champions League inay ka soo baxaan sedax gool marka lugtii hore ee semi-finalka iyo horumarka final-ka, ka dib markii Panathinaikos uu ahaa 1970-71 iyo Barcelona 1985-86.
“Habeenimadii Talaadada waxa ay noqon doontaa kulan seddexaad lixdii maalmood ee ugu danbeysay, Barcelona waxay bedeshay 11 boos oo Sabtida, sidaas darteed waa isbedel weyn” ayuu Klopp u sheegay suxufiyiinta.
“Wadajirta taageereyaasheena waxay ahayd xilli aad u dheer waxaana jira ugu yaraan fursad yar oo ay u sii dheeraan karto.
“Haddii aysan aheyn, kuwani waa labada kulan ee ugu dambeysay oo ay ku ciyaaraan xilli ciyaareed aan caadi aheyn.
“Waxaan u maleynayaa inaan u dabaaldegi laheyn qaab ciyaareed fiican oo garoonka ah iyo qaab ciyaareed aad u fiican oo ku yaala matoorada, taas ayaana noqon laheyd mid fiican.”
R/wasaare Khayre oo dhaqaale lacageed Ku taageeray Dhismaha Garoonka Kubadda Cagta Mire Awaare
Golaha Aqalka sare oo Akhrinta Koowaad marsiiyey Hindise Sharciyeedka mihnadleyaasha caafimaadka
Wasiirka Cadaaladda XFS oo Maanta furay tababar ku saabsan habraaca howl-galinta nidaamka habka dadban ee xallinta Khilaafaadka